मटेरियल ह्यान्डलिंग र लिफ्टिंग उपकरण निर्माता - आई-लिफ्ट उपकरण
२० बर्ष भन्दा बढी अनुभव सामग्री ह्यान्डलिंग उपकरणहरूमा
आई-लिफ्ट नवीनता, गुण र सेवामा समर्पित छ। हामी उपलब्ध सबै सेवाहरुमा उत्कृष्ट बनाउन को लागी प्रयास गर्छौं, जहाँ उपलब्ध छ हाम्रो ग्राहकहरु को लागी मान जोडने।
जिम्मेवार गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली तपाईंलाई उत्तम दिनको लागि
आई-लिफ्ट निरीक्षकहरूले १००% सामानको ढुवानी गर्नु अघि तपाईले उत्तम उत्पादनहरू पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न।
पूर्ण बिक्री प्रणाली पछि तपाईंको समस्या समाधान गर्न
आई-लिफ्टसँग तपाईको पहिलो बिक्रीमा भेटिएको कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्न मद्दतको लागि व्यावसायिक बिक्री ईन्जिनियरहरू छन्।
टर्न-कुञ्जी परियोजना स्वचालित म्याक बनाउने मशीन
आई-लिफ्टले सबै आवश्यक उपकरणहरू र कच्चा मालहरू प्रति महिना 800००,००० मास्कको टुक्राहरू उत्पादन गर्दछ।
आई-लिफ्ट उपकरण एशियाका विभिन्न देशहरूमा बनेको मटेरियल ह्यान्डलिंग र लिफ्टि products उत्पादनहरूको क्षेत्रमा विशेषज्ञता दिन्छ। महत्वपूर्ण विश्वव्यापी उपस्थितिको साथ, आई-लिफ्ट नवीनता, गुण र सेवाको लागि समर्पित छ। हामी आईएसओ 1 ००१ गुणवत्ता आश्वासन प्रणालीको साथ शीर्ष गुणवत्ता मापदण्डहरूको ग्यारेन्टी सहित hand०० भन्दा बढी बिभिन्न मोडलहरू सामग्री ह्यान्डलिंग र लिफ्टिंग उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं। हामीसँग व्यावसायिक ईन्जिनियरहरू छन् बिभिन्न प्रयोग आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्न। आई-लिफ्ट उत्पादनहरू ईन्जिनियरि,, निर्माण, लजिस्टिक, प्याकेजि,, कृषि, र विश्वव्यापी अन्य वाणिज्यिक अनुप्रयोगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यसले एक्स्पिडियन्ट डेलिभरीका लागि गोदामहरूमा धेरै उत्पादनहरू स्टक गर्छ र यसको अमेरिका र युरोपेली ...
रफ टेरेन ट्रक आरपी श्रृंखला
▲यो निर्माण स्थलहरू, काठको गजहरू, नर्सरीहरू र गोल्फ कोर्सहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ, किनकि ठूलो भार र स्टीयर पाङ्ग्राहरू कुनै नराम्रो ठाउँमा सजिलै घुम्छन्।
हटाउन योग्य लिथियम ब्याट्री संग पूर्ण इलेक्ट्रिक फूस
1. सानो तर बलियो फ्रेम डिजाइन, संकीर्ण गलियारा मा सञ्चालन को लागी राम्रो। 2. ह्यान्डल एकीकृत ब्याट्री प्रदर्शन र सञ्चालन नियन्त्रण, अधिक सुविधाजनक। 3. ब्याट्री हल्का र सजिलो छ ...